Namhlanje kukho iintlobo ezininzi zeebhattshi zasebusika. Ngoko ke, kubonakala ngathi unokukhetha ukhetho olunjani. Nangona kunjalo, kukho abasebenzi abanezakhono abanqwenela ukugoba izinto ngokwabo, kunye neengubo zangaphandle zasebusika akukho nto. Ukuba ufuna i-jacket entsha kwi-wardrobe yakho, kodwa ungayazi indlela yokuwutyula ngokufanelekileyo, ngoko kufuneka uphulaphule ezinye iingcebiso kunye neengcebiso ezivela kwiingcali.
Ziziphi iimpahla kunye neemodeli endingazisebenzisa
Imodeli eqhelekileyo yilebhothi ekhuselekileyo enemizuzu emine. Kubizwa ngokuba ngu-anorak. Imikhono emide kunye ne-hood ikukhusela ebusweni, kwaye sibonga kwi-clasp i-jacket iya kukhululeka. I-Collar kunye neepokotshi, oku kufana nokuba yinto yokuzihombisa, kodwa ngezinye iimeko i-collar yoboya inokusebenza njengengxowankulu ye-hood. I-Kulisk, eselulelwe ngaphantsi okanye emikhondweni enqamlekileyo ecaleni kwinqanaba liya kukunceda ukukhusela umoya. Kodwa ukuba unqumle ukuthunga ijekethi ekhumbini, i-suede okanye i-tadrap, kuya kuba yinto engabonakaliyo.
Ngokubhekiselele ekukhethweni kwendwangu, ngokuqhelekileyo kubusika kurtokispolzuyut ingubo yokufakelwa. Imifuziselo i-suede, isikhumba okanye izitya zangasese zendalo. Ukuba uthatha isigqibo sokuba ukhethe izambatho zokwenziwa, oko kukulungele ukusebenzisa izitkidi zembumba, isiseko salo yiloni. Ijacket eyenziwe kwesi sixhobo asiyi kumanzi kwaye ngexesha elifanayo liya kuvumela emoyeni. Ukuba sithetha malunga nabagcini bengubo yasebusika, kucetyiswa ukuba umise ukhetho lwakho kwi-sintepon okanye kwi-heater ebonakala ngathi, okanye kwi-fluff okanye i-peres.
Indlela yokulungiselela ukuthunga
Emva kokuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi intsimbi oyisebenzisayo kwaye imiselwe ngesimo seengubo yasebusika, ixesha elizayo lizayo. Ngaphambi kokuba uqale inkqubo yokuthunga, kufuneka uqinisekise ukuba unazo zonke izinto ezifunekayo kunye nezixhobo:
Iintambo kunye namaqhosha okwenza i-riveting
iinaliti kunye nemicu
izesekeli ezongezelelweyo (kuxhomekeke kwimodeli yengubo).
Ukuba awunalo ulwazi olwaneleyo kwishishini lokuthunga, kungcono ukumisa kwipatheni esilula kunye neyentsebenzo yengubo yasebusika. Ungasebenzisa iimpahla ezindala, ulungele i-raspory ngelixa ujikeleza ngaphakathi. Ukongeza, unokujonga kwiipatheni ezahlukeneyo kwi-Intanethi okanye kumaphephancwadi. Ngokomzekelo, kubaqalayo, iphethini elula yebhokisi yebusika, ebanjwe nge-seamstress enomdla, unomzekelo omfutshane wokuqala.
Kwimodeli, kufuneka ubale ubungakanani, kodwa awukwazi ukulibala ukuba ibhatyi liza kugqunywa kwi sweta yasebusika okanye i sweatshi. Yinqumle imveliso engcono kwiindawo ezinkulu, ezivela kumqolo, emashalofini, emakhanda kunye nemikhono. Emva kokuqala ukusebenza kunye neengcinci - obtachkov kwimikhono, iipaki kunye nezinye izinto.
Indlela yokugubha ibhatyi
Emva kokuba intsimbi isinqunywe, unokuqhubeka nokuxhamla kwimbumba kunye nokuqhekeza. Inkqubo yokuthunga ibhatyi kwi-sintepon ilula. Kufuneka uqale ukusuka phambili. Kubalulekile ukunyanzelisa i-heater kunye ne-prostrostit ngokukhawuleza kunye neziqu ezinde. Ukuba unemizila emininzi yentshaba, ngoko ke kufuneka ukuba ifakwe kwisitampu sokubamba.
Emva koko kuza ukulandelana kwamapokotshi atyunwe kwijacket. Ukuba ufuna, ke ubeke ulungelelwano oluqinileyo kunye nomsila, owenza phantsi komtya weemakhono. Amacandelo amancinci kufuneka aphathwe xa izihlanganisi eziphambili zengubo sele zigqityiwe.
Kwakhona, ungazigubungela kwiiguvudhu ze-hood ezineenkinobho zetsimbi, ezifakwe kwi-forceps ekhethekileyo kunye ne-press. Isinyathelo esilandelayo sithumela i-zipper kwi-jacket. Ukuze i-strap kunye neengxenye ze-fasteners ziqhubeke, kucetyiswa kuqala ukuba wenze uphawu ngokubamba ngesandla, uze udibanise kwi-collar. Unokuyihobisa i-hood ngenqatha yomlo, enokuthi ifumaneke okanye ifumaneke. Kwaye umnqweno wokugqibela ukuthungwa kwembombo yembombo yembumba.
Amakhowe kunye no-anyanisi
Iimfihlelo ezingcono kakhulu zobuhle
Imihla yeenwele ezivela kukhilimu omuncu
Impembelelo yeenganekwane ekuphuhliseni ubuntu
Iimbangela zokulahleka kweenwele
U-Ksenia Sobchak utshele i-Instagram ukuba waba ngumama, isithombe
Yintoni umntu angayenza ngemizuzu emihlanu ukukholisa intombi
Ungambathisa njani iingubo ze-satin?
Ukuxhatshazwa ngokwesondo emsebenzini
Iipropati eziwusizo zezambatho